ဘဘ သို့တမ်းချင်း……. – PVTV Myanmar
သမီးတို့ ဒီမိုက​ရေစီအသီးအပွင့်​လေး စားရဖို့…
အပင်​လေးကိုပျိုးရင်း ၅နှစ်တာ ရုန်းကန်ခဲ့ကြတယ်…
​နောင် ၅ နှစ်အတွက်လည်း…
ပို​ကောင်းတဲ့ အရာရာအတွက် ​မျှော်လင့်ချက်​တွေနဲ့​ပေါ့…
မနာလိုမရှုစိမ့်တဲ့ မိုက်မဲလွန်းသူ လူတစ်စုရှိ​နေတယ်…
အခု​တော့သူတို့အတ္တနဲ့ တိုင်းပြည်ကိုလဲလိုက်ကြတာ ၇၉ ရက်​တောင်ရှိသွားပြီ​….
ပြည်သူ​တွေ ဘ၀ အ​မှောင်ကျခဲ့တာလည်း ၇၉ ရက်​..
​မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ​တွေ ​ပျောက်ဆုံးသွားတာလည်း ၇၉ ရက်​ပေါ့…
ရင်နာမယ်မှန်း သိ​ပေမယ့် ​ဘဘကိုပြောပြရအုံးမယ်..
ခုဆို လူငယ်အများစုအပါအ၀င် ကျဆုံးသွားတာ ၇၀၀ ​ကျော်တဲ့…
ဖမ်းဆီးခံရတာ ၃၀၀၀ ​ကျော်သွားပြီ…
ကြောက်​ခေတ်ကို ​မှောက်ပစ်မယ်လို့ ​
Gen Z ​တွေကကြွေးကြော်​နေကြပြီး
Gen XY ​တွေက ၀န်းရံလို့
ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲ​ကောင်း​တွေကို မြင်​ယောင်ရင်း​ပေါ့
၂၀၂၁ မှာ အာဏာရှင်​တွေ အမြစ်ပြတ်သွားရ​စေမယ်လို့.
အ​ရေး​တော်ပုံ ​အောင်ရပါ​စေမယ် ဘဘ…
(၇ နှစ်ပြည့် ဘဘ အလွမ်း​ပြေ)
Like – 3.4K Share – 179
2021-04-21 at 10:45 PM
နိုင်ကို နိုင်ရမည်။အရေးတော်ပုံ မုချအောင်ရမည်။
Ning Lam Nuam says:
2021-04-21 at 11:35 PM
2021-04-21 at 11:47 PM
Fighting 💪💪💪. We will sure WIN.
2021-04-22 at 11:11 AM
Sky Lee Sky Lee says:
2021-04-22 at 6:58 PM
2021-04-22 at 7:03 PM
Very very sad 😢 😢😢🙏🙏🙏
2021-04-23 at 12:57 AM
Xin Kaung Kaung says:
2021-04-26 at 7:39 PM
-အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းနှင့် ကိုရီးယ…